Amanyathelo ama-7 esiCwangciso esiCwangcisiweyo sokuThengisa | Martech Zone
Le infographic eyoyikisayo evela kwi-Intengiso kwangoko kulo nyaka, Amanyathelo ama-7 esiCwangciso esiCwangcisiweyo soMxholo. Le ndlela ifana kakhulu nendlela uMlawuli weZicwangciso zoMxholo, uJenn Lisak, aziphuhlisa ngayo izicwangciso eziqhubekayo zabathengi bethu.
Iingcebiso ezongezelelekileyo: Okokuqala, qinisekisa ukuba inkqubo yolawulo lomxholo wakho yenziwe kakuhle ukuze iinjini zokukhangela zikwazi ukufumanisa ukuba zeziphi iziphumo zophando umxholo wakho ekufuneka uboniswe kuzo. Okwesibini, ndingatshintsha iDigg kwindlela yokukhuthaza iStumbleUpon!
tags: UkuThengiswa kweMpahlaulungiselelo lomxholoulungiselelo lomxholo
Ividiyo ecacisayo kwiiVidiyo ezichazayo: Isixhobo esingaxabisekanga kubathengisi